Mir sy Unity 8 dia ho hita ao amin'ny Ubuntu 14.10 | Avy amin'ny Linux
Mir sy Unity 8 dia ho hita ao amin'ny Ubuntu 14.10
marianogaudix | | hafa
Manohy amin'ny tantara ratsy Meksikana na Venezoeliana atoandro isika. Canonical dia nanambara, tamin'ny alàlan'ny feon'i Oliver Ries, fa i Mir sy i Unity8 dia hatao default amin'ny Ubuntu 14.10.
Ny talen'ny fiandraiketana an'i Mir Oliver Ries dia nanamafy fa ny mpizara kisarisary vaovao MIR sy Unity 8 dia hipetraka amin'ny toerana misy anao ao amin'ny Ubuntu 14.10. Ny anaran'ny kaody an'ny Ubuntu 14.10 mety i Uguisu manerana izao tontolo izao.
Apetrako aminao ny fomba fijeriko. Mpampiasa an'ny Linux Mint and of Ubuntu.
Tiako ny maniry ny hahita vintana tsara an'i Ubuntu miaraka amin'i Mir sy amin'ny Unity 8, satria tsy hadinoko ny asa nataon'i Canonical tamin'ny fampahafantarana ny Free Software. Ny andriana dia manery anao hanaiky ny asan'i Canonical amin'ny andro voalohany.
Ho ahy, Mir sy Unity 8 dia hanampy safidy ho an'ireo mpampiasa GNU / Linux, hatreto tsy hitako izay manahirana amin'ny fisian'ny Wayland sy Mir.
Manantena aho fa hitohy toy izao ny fiaraha-miaina ary tsy hiditra amin'ny adaladala tsy misy dikany sy tsy misy dikany isika, ady izay nanimbana ahy ny marina ary namoaka ny fanorenan-tsaina sy fanatisme an'ny mpampiasa maro amin'ny lafiny iray sy amin'ny lafiny iray hafa, mamela ny fahatsapana tsara sy fanakianana manorina.
Tsy mino aho fa manaraka ny dian'ny Apple i Ubuntu, tsy hitako izay famantarana na fihetsika izay manondro fa handray izany loharano mihidy izany Canonical.
Ny azoko lazaina raha tsaraina amin'ny fahitako azy dia izany kanônika mila mpizara sary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao, izany no antony isafidianako ny hampivelatra ny MIR.
Amin'ny lafiny iray Redhat, Community GNOME e Intel nisafidy izy ireo Wayland. Averiko indray amin'ny fijeriko fa afaka miara-miaina eto an-tany ny MIR sy Wayland GNU / Linux.
Tongasoa eto ny fanehoan-kevitra mahasoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Mir sy Unity 8 dia ho hita ao amin'ny Ubuntu 14.10
Zavatra tsara tsy ampiasaiko intsony ary tsy hampiasa Ubuntu intsony 🙂
Toy izany koa eto 🙂
Gadem dia hoy izy:
Toy izany koa eto, nanandrana ny OpenSuse 13.1 aho ary faly!
Mamaly an'i Gadem
Izaho koa dia mizaha toetra nyuseuse 13.1, tsy mbola nanandrana azy aho ary satria distro malaza toy izany dia tiako ny manandrana kely azy farafaharatsiny, ny distro tsy ratsy mihintsy, safidy tsara ho an'ny Ubuntu izy io, tsotra sy haingana ary miasa ny KDE tena tsara, ny olana tokana nananako dia ny momba ny tamba-jotra, raha ny tena izy dia tsy nifandray tamin'ny tariby ethernet aho, tsy hitako akory ny interface tao amin'ny mpitantana tambajotra KDE. Tsy maintsy nanao dhcpcd enp3s0 aho mba hampavitrika ny tamba-jotra, ary avy eo hametraka networkmanagger-qt, nanomboka teo tsy nisy olana, ary tsy misy zavatra mitranga, fa ho an'ny olona tsy manam-pahalalana betsaka, satria mety tsy ho tsapany fa ilay mpizara dhcpcd io. izay tsy natomboka.
Tsy tiako ihany koa fa ny lalao repository dia tsy ampidirina amin'ny alàlan'ny default, esorina ireo andinindininy kely ireo, toa distro be izy io, na eo aza ny fahitako azy, toy ny distro KISS toa ny Arch tsy misy, ho an'ny tsiro loko.
Ao an-tranoko dia mampiasa an'i Debian Wheezy aho fa tsy misy fiantraikany amiko ny MIR ao.
pcero dia hoy izy:
Na izaho koa aza.
Mamaly an'i pcero
Manohana ny MIR aho, satria manam-potoana be loatra miandry an'i Wayland isika ary tsy misy, Wayland dia tsy ho mendrika ho an'ny Ubuntu noho ny antony tsotra ny fiombonambe izay hananan'ny Ubuntu - telefaona Ubuntu - takelaka Ubuntu, noho izany dia azo atao kokoa hanao an'i Mir hiandry Wayland ho vonona ary tsy maintsy mijery raha mahafeno ny zavatra ilain'izy ireo hivory ... izany no mahatonga ahy mieritreritra fa fanapahan-kevitra tsara i Mir na dia mampiady hevitra aza izany.
Vonona i Wayland, dodona ny hamerina lainga.
Navoaka tamin'ny volana lasa izay ny kinova miorina aminy.
Afaka andro vitsivitsy dia mivoaka ny finday voalohany miaraka amin'i wayland ary amin'ny fiandohan'ny taona manaraka dia efa mivoaka ny KDE ary avy eo Gnome miaraka am-panohanana.
Ampahibemaso ireo kalandrie misy ireo famoahana, aleo tsy mamorona zavatra.
Izaho dia mety mpampiasa linux mint sy ubuntu. Ny base distro dia mifototra amin'ny fonosana URPMI: MAGEIA sy OPENMANDRIVA. Tsy misy na inona na inona Canonical maimaimpoana toa ny GNU / Linux manapa-kevitra izay làlana tokony haleha aorian'ny hanohizan'izy ireo mampiasa ny kernel linux ary mahatonga azy ireo ho anisan'ny vondrom-piarahamonina na tiantsika izany na tsia. Mirary soa amin'ny fampandrosoana ny mir ...
Araka ny hevitrao. Betsaka ny fampahalalana diso mandeha. Canonical dia afaka nifikitra tanteraka tamin'i Wayland, saingy nanapa-kevitra izy ireo, ara-politika ary mbola hajaina ihany.
Tena marina, vonona i Wayland alohan'ny Mir. Canonical dia te hanana mpizara sary azy manokana hifehezana azy ary izay milaza fa tsy izany dia mamita-tena.
Ok, tsy fantatro fa efa vonona izy, ny eritreritro dia nanapa-kevitra ny hampiasa Mir ny Ubuntu fa tsy Wayland ho an'ny tsanganana tsotra, ny tiako holazaina dia hoe Wayland, afaka mandeha amin'ny finday, takelaka, birao (efa voamarina) ary amin'ny fahitalavitra? Heveriko fa izany no antony nanapahan-kevitr'izy ireo ny hamolavola ny Mir, mora kokoa ny mampivelatra an'i Mir ary ny fananana an'io endri-javatra manan-danja io amin'ny voalohany noho ny mitondra Wayland ary miatrika ny fiantraikany rehetra ilainy.
Vonona i Wayland, na dia tsy i Mir aza, hoy ny sasany, fa rehefa vonona i Mir, toy ny fenitra raha mitondra birao, finday, takelaka ary fahitalavitra izy, lazao amiko fa manohana an'izany rehetra izany i Wayland ary matotra fa tsy mila mitondra na inona na inona? (Tsy haiko hoe maninona aho no manontany) raha tsy izany, inona no fanoherana tsy maintsy hampiasaiko raha tsy mety amin'ny finday rehefa mitady fiombonambe?
Wayland dia efa nanao an'izany ... ny hany antony dia ny nanirian'izy ireo hanao izany araka ny fombany, ary dia izay.
Tamin'ny fanamarihako dia nolazaiko anao fa afaka andro vitsivitsy dia hivoaka ny telefaona voalohany miaraka amin'i wayland (azonao atao ny google "mobile jolla"), heveriko fa manazava izay rehetra lazainao izany.
Tizen koa dia hampiasa Wayland amin'ny andiany manaraka, ary tsy tadidiko ny iray hafa ho an'ny fiara
Nilaza taminareo izy ireo ary lazaiko aminareo koa: eny wayland azo entina ary miasa amin'ny tontolo isan-karazany.
Manao fahadisoana adaladala mitovy ihany ianao amin'ny firesahana indray nefa tsy manadihady aloha. Manoro hevitra anao aho mba hametrahanao fanontaniana kely tsy dia sarotra loatra na hanohana ny fampitahana ny wayland amin'ny mir, ka ampahafantaroo kely ny tenanao avy eo, miaraka amin'ny fahalalahana tanteraka, lazainao izay azonao.tsy tsara kokoa ve izany?
Ny antony tokana dia ny mahazatra; afatory ianao.
ajajaj ity iray ity mino ny lainga rehetra canonical xD izay milaza zavatra foana ary zavatra hafa tokoa izany
Miaraka amin'ny Canonical tato ho ato, tsara kokoa ny tsy mino raha tsy tsy mahita.
Ny MIR dia maneho ny fanaovana asa in-3 bebe kokoa ary amin'ny fomba azo tsapain-tanana nefa tsy misy tombony, satria amin'ny faran'ny andro dia Wayland miaraka amina API manokana (izay manampy sosona tsy fitoviana).
Raha mahavita manao an'io asa io irery i Canonical, arahaba soa aman-tsara, mbola miandry telefaona finday mandeha miaraka amin'ny rafitra GNU / Linux amin'ny endriny tsara, android na FFOS aho, raha ubuntuphone no manao azy dia azo antoka fa hizahako izany.
Ny fanarahana ny dian-tongotr'i Apple dia tsy hanidy ny kaody satria manana fahazoan-dàlana GPL, tsy azon'izy ireo atao tsotra izao (Ataovy miankina amina zavatra manokana izany, fa tsy azo atao ny mampifanaraka izany amin'ireo distro hafa, zavatra hafa).
Cristian Ramos dia hoy izy:
Azo antoka fa ho azo ampiasaina ihany koa amin'ny 14.04 amin'ny alàlan'ny ppa ny fandefasana poloney sy ny fisafoana ireo lesoka, ny canonical dia nanao toy izany foana, tsy apetrak'izy ireo amin'ny alàlan'ny default fa azo ampiasaina mialoha
Valiny tamin'i Cristian Ramos
Ho fanontaniana iray: handeha ho any Qt ihany ve ny Unity 8 sa hitohy hiankina amin'ny Gnome?
Azoko fa hampiasa Qt ianao.
Ny zava-dehibe amiko dia izay mandresy dia ilay miasa tsara kokoa sy feno kokoa, ary na dia tsy tena afaka mampiasa mir amin'ny firaisankina aza aho, raha tsy misy xorg, dia tsy afaka milaza ny fandehany aho.
izaho manokana dia aleoko mandresy i wayland, ihany koa izay manohana ny mir dia canonical, izy irery no nanohitra ny ony ankehitriny
Heveriko fa rehefa afaka kelikely dia ho hitako ny Ubuntu miaraka amina kaody mihidy sy ny vidiny $, ny tena tsy tia ahy velively fa zavatra manokana aleoko mampiasa ny ray (debian) toy izay ny ankizy (ubuntu, mint sns) izany miasa tsara kokoa ary fantatro fa mifanaraka amin'ny mpampiasa tsirairay
Lehilahy iray hafa miresaka fotsiny hiresaka ary tsy mahalala na inona na inona momba ny teoria ambadika sy ny tsy fahafahan'ny Ubuntu, toy ny ankehitriny, dia nakatona.
vendrana bebe kokoa ve ianao izay mitsikera fotsiny fa tsy manazava radish
Ahoana no hikatona ny Ubuntu raha toa ka eo ambanin'ny gpl3 na gpl2 ny fonosany fototra rehetra? .., documéntate teo aloha.
Andao jerena, andao hampiasa ilay zavatra kely antsointsika hoe ati-doha, volondavenona ... fantatrao ve ilay tsy lanin'ny fampiasana azy, araka ny hevitrao?
Raha mampiasa azy io isika ary mamaky andalana telo amin'ny fahazoan-dàlana GPL, na lahatsoratra fototra farafaharatsiny ... na koa fanamarihana fampidirana, satria manana ny baolina hiantso ahy ho adala aho noho ny "tsy manazava", dia ahenao fa ianao efa manana fahalalana farafaharatsiny Ho tsapantsika fa ny Ubuntu dia mifototra tanteraka amin'ny rindrambaiko manana alalana amin'ny GPLv2, v3. Marina? Noho izany, raha miresaka Ity lahatsoratra ity hitantsika ity fizarana fototra kely ity:
Ny iray amin'ireo be mpampiasa indrindra dia ny GNU General Public Licence (GNU GPL). Ny mpanoratra dia mitazona ny zon'ny mpamorona, ary mamela ny fizarana sy fanovana eo ambanin'ny teny namboarina mba hiantohana fa ny kinova rehetra novaina tamin'ny rindrambaiko dia mijanona eo ambanin'ny fehezanteny voafetra kokoa an'ny GNU GPL. Mahatonga azy io tsy ho vita ny mamorona vokatra misy ampahany tsy nahazoana alalana GPL: tokony ho GPL ny iray manontolo.
Midika inona izany amintsika? Tsotra, Canonical dia miorina amin'i Debian, sa tsy izany? Ary mampiasa singa GPL be dia be izy, sa tsy izany? Ankehitriny, ny kernel Linux dia nahazo alalana tamin'ny GPLv2, sa tsy izany? Noho izany, andramo tery mafy araka izay tratranao io brainiac io, andao, fantatro fa azonao atambatra ireo sombin-javatra ...
Raha tsy afaka ianao dia handevona azy aho ary hipoitra indray:
Raha ny singa fototra amin'ny distro dia mifototra amin'ny fahazoan-dàlana maimaim-poana izay tsy mamela ny asa ho avy aminy raha tsy hoe manana fahazoan-dàlana ambanin'ny lisansa mitovy aminy mandrakotra azy ireo izy ireo, dia tsy afaka, amin'ny toe-javatra rehetra ara-dalàna akombony ny kaody azonao chiquitin ve ianao? Mety tsy izany, ka mandeha foana aho. Ka raha mihevitra ianao fa raha ny marina dia ny vato fehizoro an'ny distro dia vakio ny Unity sy ireo singa hafa (avelao ny singa fototra ao aminy toa an'i Debian sy ny kernel) dia nahazo alalana tamin'ny GPLv3 ... Ahoana ny heverinao fa mandeha ry zareo hanidy ny lay tsy maninona!? GENIUS!
Raha hanao zavatra toa izany dia mila:
a) Manaova kernel iray manontolo avy amin'ny rangotra, ovao ny fahazoan-dàlana amin'ny zavatra rehetra novolavolainy fa aza mampiasa singa maimaimpoana.
b) Makà kernel BSD, ampiasao mandritra ny fotoana lava be izy io ary ovao amin'ny BSD ny fahazoan-dàlana vokariny, ary ampiasao ireo vokatra mitovy lisansa mifanaraka amin'ny zavatra novolavolainy.
Izany rehetra izany dia mitaky asa sarotra amin'ny fomba feno habibiana na amin'ny resaka loharano na amin'ny fotoana.
Mbola mieritreritra ve ianao fa azo atao? Sarotra loatra ve ny famintinana toy izany? Mahay manome zavatra ve ianao sa mitsikera fotsiny amin'ny fiononan'ny "adala indrindra"?
Mianara, azafady, alao ny rantsantananao lavitry ny fitendry rehefa tsy hanao zavatra bebe kokoa noho ny filokana ianao, satria raha mitsikera ahy ianao noho ny tsy nanazavako na inona na inona, nefa tsy nataonao akory dia lavo tamin'io hafetsena io ihany ianao ary mifanohitra amin'ny tenanao.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe GNU dia tsy mamela anao hanavakavaka ireo fork. Noho izany, ny Ubuntu dia tsy afaka manana fananana (raha tsy manova kernel ary mandray ilay asa sarotra amin'ny famerenenana indray ny zava-drehetra miaraka amin'ny lisansa BSD, mazava ho azy).
gabito dia hoy izy:
Salama ry zalahy, ahoana no nataonareo tamin'ny Pear OS izay heverina fa tànana ankavanan'ny Gnu / Linux ary nataon'izy ireo privatisme izany, raha ny marina dia miorina amin'ny Ubuntu izany, misy manana hevitra ve?
Mamaly an'i gabito
Noho ny fikirizanana avy tamin'ny Ubunteros sy ny fahavalon'izy ireo dia tonga ny fotoana hisian'ny MIR hitsapana.
Heveriko fa hampiasa XMir izany.
ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fampiasanao xmir, lainga kanonika foana, hoy ny zavatra iray ary ny iray hafa
Canonical dia efa nitatitra fa ny kinova 14.04 dia hampiasa xorg ary ny 14.10 dia ho avy miaraka amina 100% mivantana mba hananana fotoana ampy handefasana azy alohan'ny hahatongavan'ny Ubuntu LTS vaovao.
Na ny MuyLinux aza dia nanamafy izany.
Chakra no ampiasaiko fa tsy Ubuntu fa azoko tsara fa ny vokatra iray ary ao aoriany dia orinasa mamolavola azy ary mandray fanapahan-kevitra, tsy azoko ny fankahalana ananan'ny olona izay tsy mampiasa azy. Ny hafa kosa mimenomenona noho ny sombintsombin'ny Linux distro ary ny hafa momba ny fizotran'ny Ubuntu ary mitaraina momba ny distro vaovao izay tsy mandray anjara amin'ny zava-baovao na ambany.
Juanjp dia hoy izy:
"Ny fahamendrehana dia manery anao hanaiky ny asan'i Canonical" ary mahafinaritra izany, tsara ho an'ny Canonical, avelao izy, manana safidy hafa manan-danja toy ny motera sary MIR izy, tsara izany.
"Heveriko fa tsy manaraka ny dian'ny Apple i Ubuntu", heveriko fa izany ary aingam-panahy tamin'ny fomba feno, GUI, ekosistia, filozofia, fa tsy fahazoan-dàlana, loharano misokatra na mihidy, manasongadina ity somary mifanohitra amin'ny andalana manaraka Mazava ho azy , raha ho an'ny FREEDOMANA ny soso-kevitrao fa tsy ny fifanenjehana eo anelanonana mihidy na misokatra.
«... ady izay nanimbana ahy ny marina ...», miarahaba aho, mankalaza ity fihetsika ity aho, manao an'i Linux ho tontolo madio kokoa, tsy misy troll.
Valiny tamin'i Juanjp
David Izquierdo dia hoy izy:
Tsia tsia tsia. Novakiako ireo hevitra ary hitako fa tsy misy olona manaporofo ny mahafantatra ny tena olana. Canonical dia manan-jo miharihary amin'ny fandaharana na amin'izay tadiaviny. Ny filazana fa "mihombo roa heny" na "mampizarazara ny fiaraha-monina" ary "mamorona sombintsombiny" dia hevitra fotsiny, ary izaho dia mifanaraka amin'ny roa voalohany. Araka ny voalazanao, na ny ankamaroanao, ny fahasoavan'ny vondrom-piarahamonina Open Source dia ny mety hisian'ny derivation. Ny olana dia ny Canonical dia manana tantara lava momba ny hetsika fanoherana ny fiaraha-monina. Ankoatra ny zavatra hafa, ny tsy fisian'ny fandraisana anjara amin'ilay antsoina hoe "upstream" amin'ny teny anglisy nefa tsy haiko ny dikanteniny: manana patch tsy manam-petra vita amin'ny tranomboky sy programa ampiasainy izy ireo, na dia mamoaka ilay kaody aza izy ireo dia tsy mazava. anjara-birao amin'ny tetikasa voalohany. Ny porofo? Manome fanamby ny rehetra aho mba hiasa amin'ny Unity ny fizarana tsy Ubuntu nefa tsy nosoloiko ny tranomboky rehetra. Miaraka amin'i Mir, miharatsy ny fihetsik'izy ireo manohitra ny fiarahamonina: nanitsakitsaka ny fampanantenany izy ireo (mandray anjara amin'ny kaody Wayland) ary maniry programme izay tsy mpiray amin'ny Ubuntu na tsy mila mifandray amina code ao anatin'ireo tetikasan'izy ireo manokana satria tsara ny Canonical raha ny resaka. Mampiseho ny tantara fa tsy handray anjara kely indrindra amin'ny fampiasan'ny Mir ivelan'ny Ubuntu izy ireo (mpamily Intel, KWin, heveriko fa nisy aza zavatra tsy maintsy naterak'izany tamin'ny androny). Tsy afa-po amin'ny fieboeboana toy izany (nanapotika ahy kely fotsiny), rehefa nolavina ny patch-ny, nisy olo-malaza fantatsika rehetra nanao fanambarana tamina heviny politika tsy mendrika tao amin'ny Vondron'olona niantsoana olona iray hoe "antoko open tea tea open source." Ary izany rehetra lazaiko izany dia ny ampahany amin'ny opera savony izay azon'ny rehetra manana saina salama, fa amin'ny tsy fahalalana ny fandaharana amin'ny haavon'ny mpizara sy ny mpanjifa amin'ny windows dia tsy azo atao ny mitsara raha tena ratsy tokoa ny kaody Mir voasoratra araka ny voalaza.
Mba hanazavana ny toerana misy ahy: firy ny Ubuntu nampahafantatra ahy ny Linux, saingy faly aho ankehitriny miaraka amin'i Arch sy KDE. Ny fahombiazan'i Mir dia tsy miraharaha ahy tanteraka satria tsy ho afaka mivoaka amin'ny Ubuntu mihitsy izy.
Ary farany, raha tsy mitanisa ireo olona voalaza aho, dia satria mora hita izy ireo amin'ny fikarohana, fa raha ilaina dia afaka manome azy ireo aho raha vao manam-potoana bebe kokoa aho.
Valiny tamin'i David Izquierdo
Mifanaraka amin'ny atin'ny lahatsoratra, tsara raha fantatry ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux fa ireo izay mieritreritra tsy mitovy, izay miasa hafa, nefa manana tanjona mitovy amin'ny ambiny: (hanitatra GUNU / Linux, ataovy izay hahatratra ny mpampiasa rehetra an'ny rindrambaiko). mendrika hajaina izy fa tsy mahazo tehina amin'ny kodiarany. Canonical dia manana ny zony hamokatra rindranasa fananana arak'izay ilain'izy ireo amin'ny OS-ny. MIR SY WAYLAND dia afaka miara-miaina tsy misy olana amin'ny fiarahamonina Linux.
Canonical tsara !!! X.org dia lany andro amin'ny teknolojia ankehitriny (ary izany dia miteraka fanovana lehibe) ... Mihombo hatrany hatrany ny fanavaozana ny mpamokatra ary tara be dia be ny teknolojia vaovao toa ny sary Hybrid ao amin'ny Xorg (Ka ho an'ny Power Play an'ny AMD dia mila ianao restart ny mpizara X amin'ny solosaina (izay mitranga ao amin'ny Windows miaraka amin'ny rafitra)… Miaraka amin'ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina rehetra, ny mpanamboatra ary ny Canonical dia hanana sehatra lehibe afaka mifaninana amin'ny takiana ankehitriny isika… Mirary soa Canonical… !!! Mandeha tsara ny zava-drehetra ... Tsy andriko ny Ubuntu 14.10 (Mpiserasera Manjaro faly aho izao fa noho ny fanampiana hoeritreretiko indroa)
alejoecheverri0101 dia hoy izy:
Azo antoka fa faly ny rehetra satria ny canonical dia nandefa ny mpizara azy manokana, ary manamarina ny tenany izy ireo milaza fa afaka miara-miaina ny wayland sy ny mir.
fa ny tena olana eto dia ny fanohanana, nvida ary amd zara raha mandefa mpamily ho an'ny GNU / Linux, ankehitriny ve izy ireo no mody manohana ny wayland ary miray miaraka?
Azafady, ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fanohanan'ny mir, satria izy ireo ihany no liana amin'ny rafitra manana quota tsara indrindra, ary satria ubuntu izy amin'izao fotoana izao, dia ny ambiny izay ampiasantsika ny distro hafa miaraka amin'ny wayland no itranganay.
Zavatra iray ny fananana sombintsombiny amin'ny zavatra toy ny programa sy ny tontolon'ny birao, fa amin'ny zavatra manan-danja toy ny mpizara sary dia tsy azo ekena.
Canonical dia tsy mieritreritra ny tombotsoan'ny tsirairay, raha tsy ny rafitranao ihany.
Valio amin'i alejoecheverri0101
Zava-misy izany rehefa mijery Linux ianao dia mijery an'i Ubuntu, ary izany no antony nahazakan'ny Ubuntu ny fanohanan'ny mpamily tsara indrindra (manokana na tsy andoavam-bola), mba hanehoana bokotra iray, miaraka amin'ny kinova famaranana Opensuse 13.1 tsy manana ny mpamily AMD. alefa ary amin'ny kinova beta an'ny Ubuntu raha niasa izy io, ary ny fampiasana io mpamily tsy miankina io dia mamaritra ny fampiasana na tsia ny fizarana, satria raha tsy misy azy dia misy kahie maro izay lasa mafana
Namaky zavatra betsaka momba ny fahavoazana ateraky ny fihinanana tafahoatra ...
Namaky zavatra betsaka momba ny loza mety hitranga amin'ny fisotroan-toaka be loatra aho ...
Ary namaky zavatra betsaka momba ny fahasimban'ny firaisana ara-nofo be loatra aho
Nanapa-kevitra ny hijanona tsy hamaky intsony aho!
Namaky zavatra betsaka momba ny Ubuntu momba sy manohitra ...
Nanapa-kevitra ny hanohy hampiasa ny Dada Debian anao aho!
ArcNexus dia hoy izy:
Heveriko fa toa anao, amin'ny farany, ireo tsikera manimba ireo dia nivadika ho mandreraka ary tsy ankasitrahan'ny gnu.
Mampiasa ny Fedora, Arch, Antergos ary Ubuntu aho, ary samy manana ny zavatra tsara izy ireo fa tsy zavatra tsara loatra, koa mba misy Mir sy izay tetikasa manome zavatra ho an'ny GNU / Linux.
Mamaly an'i ArcNexus
Faly aho amin'ny Manjaro Openbox: D, fa ny tsirairay dia mampiasa ny distro mifanaraka aminy indrindra, ny zavatra tsara amin'ny tontolon'ny Linux, ny fahasamihafana misy eo aminy.
Oscar Bustamante dia hoy izy:
Alohan'ny hanombohan'ny olona iray miteraka resabe ratsy dia alao ao an-tsaina fa misy vokatra vaovao azo nohosorana. Izay no mahaliana azy kokoa satria havaozina foana, mivoatra, ary mahita fampiasa vaovao amin'izany isika rehetra ary noho izany dia mila mivoatra indray isika. Nandritra ny taonako (antsasaky ny zato), satria matihanina amin'ny fahasalamana tsy misy fiofanana amin'ny rafitra, Linux dia akademia tsara ho ahy ary rehefa miresaka amin'ny tanora aho, isam-bolana dia mangataka amiko ny iray na roa hanohana azy ireo amin'ny fametrahana amin'ny solosain'izy ireo ary avy eo I Manisa na faly izy ireo miaraka amin'ny vokatra. Ka: manaova hafaliana ary FAHORIANA MIAINA MIAINA Miarahaba an'ireo distro Linux rehetra
Valiny tamin'i Oscar Bustamante
Marco Mtz. dia hoy izy:
Inona no fiantraikany amin'ny ubuntu iza no mivoatra mir? Te-hifehy ny fivoaran'izy ireo fotsiny izy ireo ary te ho azo antoka fa ny fiovana rehetra hataon'izy ireo dia nampiasa Linux nandritra ny taona maro aho ary nampiasa fizarana miorina amin'ny Ubuntu, nahoana? satria ireo lesoka ireo dia manamboatra lesoka izay avelan'i ubuntu, toy ny amin'ny linux mint, izay distro tena tsara ary manamboatra lesoka izay tsy manitsy ireo canonika, mpampiasa afovoany aho, tsy manam-pahaizana linux, fa ny zavatra iray manelingelina ahy amin'ny lafiny iray dia ireo taolana mena izay mihevitra azy ho jeneraly, manome hevitra momba izay fantany ny olona iray, angamba kely saina kely amin'ny zavatra maro isika, saingy tsy natao ho tafintohina izy ireo rehefa apetraka ny fanontaniana iray na misy zavatra voatsikera, toy ny mpiara-mianatra izay manafintohina amin'ny filazàny ny hampiasa ilay volondavenona ao an-dohany na zavatra iray ho azy, ireo karazan-kevitra ireo no manosika ny olona hampiasa linux, satria rehefa manontany izy ireo dia mahatsapa fa voatafika izy ireo, mahamenatra ve raha tsy tena mampiasa volondavenona ity olona ity araka ny nambarany fa tokony zaraina tsy misy manafintohina ny fahalalany sy ny mombamomba azy, sa tsy izany no fanahin'ny tontolon'ny linux amin'ny ankapobeny? fampianarana sy fizarana fahalalana amin'ny rehetra? Mahamenatra tokoa fa ireo karazan'olona ireo dia eny, izany no tsy mamporisihana ny olona hampiasa linux, satria mahita antsika ho atidoha faran'izay mahasosotra sy manelingelina izy ireo raha mangataka zavatra ianao dia mamaly anao toa adala ianao, saingy misy ny fitenenana izay milaza hoe, ny tsy fahalalana no betsaka kokoa noho izay tsy manontany noho izay mihevitra fa mahalala ny zavatra rehetra.
Valiny tamin'i Marco Mtz.
Michelangelo AR dia hoy izy:
Faly amin'ny Ubuntu aho, raha ny marina, nividy ny Aquaris E4.5 Ubuntu Edition aho, ary, na dia mbola vitsy aza ny rindrambaiko, dia faly aho ...
Valio amin'i Miguel Ángel AR
Famahana olana amin'ny audio amin'ny Gigabyte GA-H61M-DS2 Motherboard
Mpisava lalana izay mamela antsika!